Cabdirixmaan Faroole oo ku Baaqay in Nabad lagu Dhameeyo Colaadaha Deegaanka Qoriley – Radio Daljir
Seteembar 24, 2015 5:44 b 0
Garowe, September 24, 2015 : Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud Farole oo maanta dadweynaha Garowe kula tukaday garoonka cayaaraha ee Isbartiimada ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedka ka socda deegaanka Qorilay ee gobolka Sool.
Farole waxaa uu dowladda iyo shacabkaba ujeediyey in lagudo galo sidii loo xalin lahaa dagaal beeleedka ka socda Qorilay, waxaa uuna tilmaamay in beelaha walaala ah la da dajiyo sidii loo xalin lahaa colaada dhextaala.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa ugu baaqay dowlada Ethiopia inay qayb ka qaadato sidii colaada loo dhamayn lahaa,labada beeleed ayuu ugu ujeediyey inay ka waan toobaan colaada dhextaal oo ay xaliyaan xurgufta dhextaala.
Hadalka Farole ayaa kusoo aaday xili xalay labo gaari ay rasaaseeyeen Tuulada Jalam oo ay ku dhaawacmeen 9 Ruux, waxaana baabuurta loo aanaynayaa dagaalka labada beelood.
AU Special Representative for Somalia sends a message of goodwill to Somalis on the occassion of Eid Ul Adha